विश्वकिर्तिमानी गोलरक्षक एलिसनले गरे यस्तो खुलासा ! – Khel Dainik
विश्वकिर्तिमानी गोलरक्षक एलिसनले गरे यस्तो खुलासा !
श्रावण ५, २०७५ | (PostaComment)
च्याम्पियन्स लिगमा एलिसन (निलो) र सलाह भिड्ने क्रममा ।
एजेन्सी । विश्व कै सबैभन्दा महँगा गोलरक्षकका रुपमा लिभरपुल आएका ब्राजिलियन स्टपर एलिसनले आफूलाई एनफिल्ड आउन एजिप्शियन स्टार मोहमद सलाहले म्यासेज गरेको खुलासा गरेका छन् । एलिसन र सलाहले एएस रोमामा रहँदा सन् २०१६–१७ को सिजन सँगै खेलेका थिए ।
एलिसनका अनुसार सलाहले उनलाई म्यासेज गर्दै लिभरपुलमा आउन प्रोत्साहित गरेका थिए । लिभरपुलले केही दिन अघि मात्र एलिसनलाई विश्व किर्तिमानी रकम ७२.५ मिलियन युरो (६६.८ मिलियन पाउण्ड) मा रोमाबाट अनुबन्ध गरेको थियो ।
एलिनसले एनफिल्डमा ६ बर्षको सम्झौता गरेका छन् । पछिल्ला दुई सिजनदेखि उनी रोमामा आवद्ध थिए । साथै उनले गत सिजन क्लबका लागि ३७ म्याच खेलेका थिए भने रोमालाई च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलसम्म पुराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
एलिसनका अनुसार आफ्नो लिभरपुल स्थानान्तरणबारे कुरा भईरहँदा सलाहले उनलाई म्यासेज गरेका थिए । लिभरपुलको आधिकारिक वेबसाईटसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, “जब उनले (सलाह) रोमा छोडे तब हामी खासै सम्पर्क थिएनौं । तर गत अप्रिलमा च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा एक आपसमा भिड्दा हाम्रो दोस्रोपटक भेट भएको थियो ।
The sender?? @MoSalah. 樂
उनले मलाई म्यासेज गरेका थिए र लेखेका थिए ‘हे, तिमीले के कुरालाई पर्खिरहेका छौ ?’ त्यतिबेला लिभरपुलसँग मेरो अनुबन्धको कुरा लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो । अनि मैले जवाफ दिएँ ‘शान्त बस, म आउँदैछु’ ।
मलाई खुशी लागेको छ कि म उनीसँग फेरि खेल्दैछु । उनी एक शानदार खेलाडी हुन् र ड्रसिङ रुममा उनको भूमिका अझ ठूलो हुन्छ । उनी एक रमाइलो व्यक्ति हुन् र त्यो सबैभन्दा आवश्यक छ । यी शानदार खेलाडीहरुसँग मैले सधै अभ्यास गर्नु एउटा उत्कृष्ट क्षण हुनेछ ।”
← प्रि–सिजन टुरको पहिलो खेल मै हार्यो इङलिस च्याम्पियन सिटी (भिडियोसहित) चेल्सीको बेस्ट प्लेयर हुन हजार्ड, हामीलाई उनको खाँचो छ : फेब्रिगास →
विश्वकप छनौटमा नेपालको पहिलो प्रतिद्वन्द्वी कुवेत श्रावण ५, २०७५
किरण फेरि आइ लिग क्लब मिनर्वा पञ्जाबमा आवद्ध श्रावण ५, २०७५
राष्ट्रिय खेलाडी स्वेच्छाले गरीन् आफ्नै व्यवसायको शुरुवात श्रावण ५, २०७५
धनकुटामा बन्ने अत्याधुनिक रंगशालाको डिपीआर तयार श्रावण ५, २०७५
पोखरा रंगशाला बारे छलफल श्रावण ५, २०७५
नेपालको विश्वकप छनौट ड्र बारे यसो भन्छन् प्रशिक्षक कालिन… श्रावण ५, २०७५